Akhriso Warbixin ku saabsan heeganka la galiyay ciidamada DF ee Soomaliya oo la helay |
Akhriso Warbixin ku saabsan heeganka la galiyay ciidamada DF ee Soomaliya oo la helay
Ciidamada amaanka dawlada federaalka Soomaaliya ayaa tan iyo Talaadadii ku jira heegan sare iyagoo hawlgalana ay ka socdaan degmooyinka magaalada Muqdisho, iyadoo dawladu ay sheegeyso in ay sii socon doonaan hawlgalada illaa waqti aan la sheegin.
Waxaa weli xiran waddooyinka muhimka ah ee magaalada caasimada iyadoo dhaqdhaqaaqa gaadiidka rayidka gebi ahaan la joojiyey. Dadweynaha Muqdisho ayaa intooda shsqooyinka aadeysa, ganacsatada iyo ardayda iyo macalimiinta dugsiyada iyo jaamacadaha waxay maalayaan lugtooda maadaama aaney jirin wax gaadiidka dadweyne ah oo la raacayo.
Ciidamo isugu jira booliska, nabadsugida iyo militari oo aad u hubeysan isla markaana wata baabuurta dagaalka ayaa taagan dhamaan jidadka muhiimka ah ee xiriiriya magaalada sida, wadada KM4, Makka Al Mukarama, wadada garoonka diyaaradaha, wadada wadnaha, Soddonkaiyo degmooyinka Waaberi, Xamarweyne, Xamarjajab, Wardhiigley, Hawlwadaag iyo Hodan.
Sababaha hawlgalada Muqdisho
Aadan Xaashi Ceyrow.
Dadweynaha ayaa ku jahwareeray subaxnimadii Talaadada markii ay ku soo tooseen jidadkii waaweynaa oo xiran iyo gaadiidkii oo joogsaday. Mana jirin wax wargelin ah oo horey dawladu u sii sheegtay, waxayna dadku isweydiinayeen su’aalo ah in wufuud ay soo dageyso iyo in madaxda dawlada ay garoonka ka dhoofi doonaan.
Wasiirka arrimaha gudaha Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka hadlay hawlgalka ayaa sheegay inuusan jirin “wax weyn oo la dareemay” hase yeeshee hawgalkan Muqdisho kasocda uu qeyb ka yahay dadaalada amni sugida ee ay hay’adaha amaanka horey u sameyn jireen.
Laakiin gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir Cali Axmed Guure ayaa sheegay inay heleen digniino khatar oo sheegaya in Al Shabaab ay weeraro ka fulin doonaan magaalada Muqdisho maalmahan, sidaasi darteed ay ciidamada u adkeeyeen amaanka caasimada.
Ilo wareed ka tirsan hay’adaha amaanka ayaa RBC radio usheegay in sababta ka dambeysa hawlgalada Muqdisho ay tahay iyadoo la helay in kooxda Al Shabaab ay diyaarinayaan weeraro dhiig badan ku daato oo ay rabaan inay ku soo beegaan maalmaha ugu horreeya bishan May ee hadda bilaabatay.
– 1-da bisha May: Waa maalintii magaalada Dhuusamareeb lagu dilay hogaamiyihii hore ee Al Shabaab Aadan Xaashi Ceyrow (Macalin Aadan). Waxaa Ceyrow lagu dilay isaga iyo dadkii la joogeyba madfac badda laga soo tuuray oo Mareykanka kula beegsaday xilli uu ku sugnaa gurigiisa magaalada Dhuusamareeb 1/05/2008.
Usaama Bin Laden.
Al Shabaab ayaa dhowr jeer weeraro qaaday maalintan oo kale waxayna sidoo kale marar badan hanjabaadyo ku sheegeen inay u aargudi doonaan “Macalinkooda”. Sidoo kale Al Qaacida ayaa iyaguna dhowr jeer ku goodiyey inay u aargudayaan dadka laga dilay labada koox.
– 2-da bisha May: Waa maalintii la dilay hogaamiyihii ururka Al Qaacida Usama Bin Laden. Bin Laden oo ay ururkiisa hoostagto kooxda Al Shabaab ayaa waxaa lagu dilay weerar ay fuliyeen ciidamo si gaar ah loogu diray oo Mareykanka leeyahay kuwaasoo ugu dhacay gurigiisa magaalada Abotabad ee wadanka Pakistan 2/05/2011.
Dadweynaha Muqdisho ayaa yareeyay socodkooda xitaa kuwa lugeynaya, waxaana dadka qaarkood ay iska joogeen guryahooda markii ay ogaadeen in maalmahan isku xiga ay yihiin bartilmaameed Al Shabaabka leeyihiin.